Pronology ၏ MAM ပလက်ဖောင်းသည်အဆင့်မြင့်မီတာဒေတာလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဖော်ပြသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Pronology ရဲ့ပေးခဲ့သည်ပလက်ဖောင်းအဆင့်မြင့် Metadata လုပ်ဆောင်မှု Features
Las Vegas, မတ် 31, 2015 - Pronology, ဖြတ်တောက်-အစွန်းမီဒီယာဗဟိုပြုလုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပြုစုသူ, NAB 2015 (Booth SL12517) မှာသူ့ရဲ့ပြည့်စုံဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု (ပေးခဲ့သည်) စနစ်အတွင်းကြွယ်ဝတဲ့ metadata ကိုထောကျပံ့ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ Pronology'' s ကိုပေးခဲ့သည်ဆော့ဖျဝဲတစျခုလုံးထုတ်လုပ်မှုသံသရာတစ်လျှောက်လုံးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရှင်းလင်းအမျိုးအစားများအတွက်အဖွဲ့အစည်း metadata ကိုအပေါ်ကြီးမားတဲ့အထူးအလေးပေးဖော်ပြထား။
"ဟုအဆိုပါအတွင်းအဆိုပါ tools များ Pronology ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မည်သည့်အချက်မှာပိုင်ဆိုင်မှုမှ metadata ကိုအထောက်အကူပြုရန်၎င်း၏စွမ်းရည်အပါအဝင်ပလက်ဖောင်း, တတ်နိုင်သမျှအကျိုးရှိစွာနှင့်စနစ်တကျဖြစ်မယ့်ထုတ်လုပ်မှုကို enable, "သူ Mike Shore ၏ပူးတွဲတည်ထောင်သူကပြောပါတယ် Pronology။ "ဒီ tools တွေကိုသူတို့ဖမ်းမိခဲ့ကြမီကပင်ပိုင်ဆိုင်မှုစာရငျးဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက်ခွင့်ပြု, သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ဤသည်ကထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအသွားအလာအထဲသို့ဝင်သောမတိုင်မီအရာအားလုံးကိုခွဲခြားရရှိကြောင်းသေချာ။ ဝင်လာသောရိုက်ကူးပမာဏနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်သည့်အခါအဖြစ်မှန်ရှိုးများ, ရာသီရှည်ရုပ်မြင်သံကြားဘဏ်ဍာသို့မဟုတ်အထူးဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူအမှုဖြစ်သကဲ့သို့ဤသည်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးပါသည်။ "
အဆိုပါ Pronology စနစ်ကတိုက်ရိုက်လွှ-to-air နှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးအတွက်သင်ယူမှု, စီမံခန့်ခွဲမှု, ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် archive ကိုစွမ်းရည်ကယ်တင်မယ့်ပြီးပြည့်စုံသော, All-အားလုံးပါဝင်နိုင်, ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦး-ဖော်ရွေ interface ကိုအတွင်းမော်ကွန်းတင်မှစားသုံးမိရာမှအားလုံးဖြစ်စဉ်များကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းအားဖြင့်, Pronology အမှန်တကယ်အဆုံးမှအဆုံးသို့ဖြေရှင်းချက်ပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ software ကိုရဲ့အဆင့်မြင့် metadata ကို features တွေသတ်သတ်မှတ်မှတ်ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီမယ့်လမ်းအတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုခွဲခြားဖို့အတွက် tools များနှင့်အတူအသုံးပြုသူများကိုပေး။ ၎င်း၏ Web-browser ကို interface ကိုထုတ်လုပ်သူများ, အမှုဆောင်အရာရှိများနှင့်မည်သည့်အခွင့်အာဏာပုဂ္ဂိုလ်များလုံလုံခြုံခြုံဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာထံမှအကြောင်းအရာကိုကြည့်ရှုရန်စွမ်းရည်ကိုပေးသည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုအဖွဲ့အစည်းနဲ့စတင် Pronology'' s ကိုစိတ်ကြိုက် folder ကိုသစ်ပင်။ ဒါကအခြေခံဖွဲ့စည်းပုံထုတ်လုပ်မှုစတင်မီကပင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ပြီးတော့ထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ယင်ကောင်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဖိုင်တွဲသစ်ပင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ရိုးရိုးအဖွဲ့အစည်းအတွက်စာဖိုင်တွဲနဲ့ subfolders ထောက်ခံပါတယ်။ ဤသည်တိကျသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသောနှင့်တင်သွင်းခဲ့ကြရာအဖြစ်တစ်ခု universal လမ်းညွှန်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဖိုင်တွဲသစ်ပင်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတလျှောက်လုံးတသမတ်တည်းဖြစ်သကဲ့သို့, တကထုတ်လုပ်မှု၏အားလုံးအင်္ဂါတစ်ချက်မှာနားလညျနိုငျတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတခုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
Pronology မြင့်မားသော, Off-line ကိုများနှင့် proxy ကိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေအပါအဝင် - အလိုအလြောကျအသီးအသီးပိုင်ဆိုင်မှု၏မျိုးစုံဆုံးဖြတ်ချက်တွေစီမံခန့်ခွဲ။ metadata ကိုအလိုအလျောက်အားလုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေအသုံးချနေသည်နှင့်မည်သည့်အချက်မှာကဆက်ပြောသည်သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ Pronology'' s ကို Web-browser ကို interface ကိုသတင်းအချက်အလက်ထပ်တူပြုခြင်းအတွက်အစဉ်အမြဲကြောင်းသေချာစေရန် Real-time အားလုံးကိုအသုံးပြုသူများကို update ။ ဒါကြောင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းပင်အဖြစ် - စနစ်လည်းအသုံးပြုသူများကိုအများကြီး သာ. ကြီးမြတ်အသေးစိတ်အတွက်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏အသေးစိတ်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုတော်မူသောပြည့်စုံသောပိုင်ဆိုင်မှု Viewer ကို, ပေးထားပါတယ်။
အဆိုပါ Pronology ပလက်ဖောင်းပေးထားသောဖိုင်တွဲ (ဥပမာ Multi-ကင်မရာအာဆီယံ) အတွင်းအားလုံးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအသုံးချနိုင်မယ့်ကျယ်ပြန့်အမှတ်အသားဖြစ်သော folder ကို-based metadata ကို, အဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုတိကျတဲ့ metadata ကိုနှစ်ဦးစလုံးအဘို့အခွင့်ပြုထားသည်။ metadata အမျိုးအစားနှင့်တန်ဖိုးများကိုသိသိသာသာလူ့-အမှားလျှော့ချနှင့် entry ကိုဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်, စနစ်အတွက် Pre-defined နိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူအချိန်အတွက်တစ်ခုတည်းအမှတ်အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, timecode မှတ်စု၏ပုံစံအတွက်အချိန်သတ်သတ်မှတ်မှတ်မှတ်စာများထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဤပြန်လည်သိမ်းဆည်းများအတွက်ရှာဖွေရန်နှင့်ပြည့်စုံသောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူတစ်ကလစ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်သောအဘို့ကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ထုတ်လုပ်မှုအမှုထမ်းနိုင်ပါတယ်။ Timecode မှတ်စုကိုပင်ထပ်မံရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအတွက်အရောင်များနှင့်ကြယ်များ (ငါးမှတဆင့်တဦးတည်း) ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
တစ်ဦးအပိုဆောင်းကိရိယာတခုကဲ့သို့စနစ်ကတိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်မှု၏အလယ်၌နေစဉ်အတွင်းအထူးသ metadata ကိုများနှင့်မှတ်စုများမှလျင်မြန်စွာ entry ကိုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲတဲ့ "တိုက်ရိုက်" logger တို့ပါဝင်သည်။ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသောတဂ်လူ့-အမှား minimize လုပ်ဖို့ကြိုတင်တစ်ဦးရိုက်ကူးဖို့ဒါမှမဟုတ်စဉ်အတွင်းထူထောင်နိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားတဂ်မှတ်စုအစဉ်မပြတ်ဥပမာအင်တာဗျူး၏ကူးယူ simplifying စီသတ်သတ်မှတ်မှတ် metadata ကို entry ကိုများအတွက် re-assign ယင်းတဂ်ရန်မလိုဘဲဆက်ပြောသည်ခံရဖို့အဘို့အခွင့်ပြုခြင်း "ချောင်းကို" ဟုသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်၏အစအဦးမှာဝငျကွသော metadata ကိုအပြည့်အဝအားသာချက်ယူပေးရန်, Pronology နာမတော်ကိုရိုးရှင်းတဲ့စာသား, အချိန်အပိုင်းအခြားသို့မဟုတ် TAG ရုံအနည်းငယ်: အသုံးပြုသူများသည်အပါအဝင်စံ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြု. အကြောင်းအရာနေရာချထားဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့အဆင့်မြင့် search function များအားပေးထားပါတယ်။ စံရိုက်ချက်များဖော်ထုတ်နှင့်ရွေးချယ်ထားသည့်ကြသည်နှင့်တပြိုင်နက်ဤတိကျတဲ့ကလစ်ပ်ထို့နောက်စိတ်ကြိုက် bins သို့ဖွဲ့စည်းနိုင်ပါသည်။ ဤအ bins ကနေရှေးခယျြထားကလစ်ပ်ထို့နောက် "ကွက်ကို" သို့ကျဆင်းသွားခြင်းနှင့်အယ်ဒီတာတစ်ဦး sequence ကိုအဖြစ်ကိုစလှေတျနိုငျသညျ။ ဤအပာဆို resolution ကိုမှဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်ကတည်းကအယ်ဒီတာအဆိုပါ load နိုင်ပါတယ် Pronology သူတို့ရဲ့ NLE သို့ကွက်ကိုအလိုအလျောက်လိုင်း-ပေါ်တွင်သို့မဟုတ် Off-line ကိုအလုပ်များအတွက်သင့်လျော်သော resolution ကိုလင့်ထားသော။ Pronology အပါအဝင် NLE စနစ်များအကွာအဝေးကို support လွန်စွာလိုလားသော, Adobe ကနှင့် Apple ။
Pronology လည်းပြည့်စုံ archive ကိုဖြေရှင်းချက်ပါဝင်သည်။ တင်သွင်းနှင့် / သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာမှတျတမျးတငျထားနှင့်၎င်း၏ဆက်စပ် metadata ကို LTO data တွေကိုတိပ်နှစ်ဦးစလုံးမှအဖြစ်မှထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ် "မိုဃ်းတိမ်သည်။ " အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ Open-စံကိုဖန်တီးရန်တစ်ခုတည်း LTO တိပ် drive ကိုသို့မဟုတ် multi-drive ကိုစက်ရုပ်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် option ရှိသည် LTFS ကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်အလိုအလျှောက် backup လုပ်ထားချပ်။ ဤရွေ့ကား archive ကိုမိတ္တူအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့၏ဘရောက်ဇာကနေတိုက်ရိုက်မီဒီယာများ၏အပြည့်အဝသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံတွင်ထည့်သွင်း Pronology ပူဇော်သက္ကာကိုမိုဃ်းတိမ်-based option ကိုရန် archive ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသမျှတို့ကိုတိုးချဲ့နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Pronology'' s ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစီမံခန့်ခွဲမှု tools တွေကို archive ကိုမှဝယ်ယူရာမှထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကို unifies ကြောင်းတစ်ခုတည်းပလက်ဖောင်းကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်းနှင့်ယနေ့ဖိုင်-based Workflows များအတွက်ဖြန့်ဖြူးများ၏တာဝန်များကိုရိုးရှင်း။ Pronology တစ်ပြိုင်နက်တည်းနှင့်အဝေးမှဆည်းပူးဖို့အသုံးပြုသူတစ်ဦးအဆမဲ့အရေအတွက်ကခွင့်ပြု, စီမံခန့်ခွဲ, အတည်ပြု, log, ဖြန့်ဝေ, တစ်ဦးစံ web browser ကိုသုံးပြီး transcode နှင့် archive ကိုအကြောင်းအရာ။ ၎င်း၏အသုံးပြုသူ-ဖော်ရွေ interface ကိုဖြစ်နိုင်သမျှ Workflows ၏ကျယ်ပြန့ထားရှိရန်, အသုံးပြုသူများအတွက်အသုံးပြုသူများကဒီဇိုင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, 212-660-1600 မှာကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်ပါ / [အီးမေးလျ protected]pronology.com or www ။ www မှာလာလည်ပါ။pronology.com ။
NAB 2015 Pronology တီဗီနည်းပညာ 2015-03-31
ယခင်: DAM နယူးယောက် join ဖို့5ထိပ်တန်းအကြောင်းပြချက်
နောက်တစ်ခု: Myers PBS TechCon 2015 အဘို့အစီစဉ်ကြေညာ